कुकुरहरु को लागी जोडहरु लाई बलियो बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो chondroprotectors | कुकुरहरुको संसार
सुसाना Godoy | 15/10/2021 11:48 | रोगहरू
हामी सधैं हाम्रो जनावरहरुको स्वास्थ्य को बारे मा धेरै सजग छौं। तेसैले, आज हामी को बारे मा कुरा गर्नु पर्छ कुकुरहरु को लागी chondroprotectors, किनकि यद्यपि हामी सधैं धेरै औषधिहरु को लागी दिइएका छैनौं, केहि पनी खाता मा सबै भन्दा प्राकृतिक पूरकहरु लाई लिन को लागी ताकि उनीहरु लाई तपाइँलाई अझ राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
हामी राम्ररी जान्दछौं, त्यहाँ केहि रोगहरु छन् जो रोक्न सकिदैन, यद्यपि हामी चाहन्छौं, तर त्यो धेरै सामान्य हुन सक्छ। तर, यो समय उनीहरुको प्रभाव लाई कम गर्न को लागी हो र त्यो जहाँ कुकुरहरु को लागी chondroprotectors कि आज हाम्रो चिन्ता को खेल मा आउँछ। के तपाइँ उनीहरु को बारे मा सबै कुरा जान्न चाहानुहुन्छ?
1 एक chondroprotector के हो
2 के यो मेरो कुकुर को लागी chondroprotectors लिन को लागी राम्रो छ यदि उसलाई कुनै संयुक्त रोग छैन?
3 कुन रोगहरु मा एक chondroprotector कुकुरहरु को लागी मद्दत गर्दछ
4 कुकुरहरु को लागी chondroprotectors को सर्वश्रेष्ठ ब्रान्डहरु
5 के कुकुरहरु को लागी chondroprotectors साइड इफेक्ट छ?
6 मेरो कुकुर लाई chondroprotectors कसरी दिने
7 के chondroprotectors कुकुरहरु को लागी काम गर्छन्?
8 कुकुरहरु को लागी सस्तो chondroprotectors किन्न को लागी
एक chondroprotector के हो
Cosequin 00.1415.00 अल्ट्रा ...
Cosequin डी एस हा MSM 120 -...
Petprive पूरक ...
हामी उनीहरु को बारे मा भन्न सक्छौं कि उनीहरु एक प्राकृतिक पूरक वा आहार पूरक हो कि हाइड्रेशन सुधार गर्न को लागी जबकि उपास्थि को पोषण गरी रहेको छ। तेसैले जोड् पुरस्कृत, बलियो र सुरक्षित हुनेछ, किनकि हामीले पहिले भनेका थियौं, यो धेरै जसो कुकुरहरुमा सबैभन्दा सामान्य रोगहरु मध्ये एक हुन सक्छ।
त्यो भन्यो, यो पनि याद गर्नु पर्छ कि यो कम गर्न वा ओस्टियोआर्थराइटिस जस्तै रोगहरु लाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। केहि कि लंगडापन को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ, गतिशीलता को हानि वा कठोरता र कि उपचार वा रोकथाम गर्न को लागी जति सक्दो चाँडो गर्न को लागी, यसैले प्राकृतिक पूरकहरु पनि यी जस्तै मामलाहरुमा आवश्यक छ।
के यो मेरो कुकुर को लागी chondroprotectors लिन को लागी राम्रो छ यदि उसलाई कुनै संयुक्त रोग छैन?
सत्य यो हो कि हो। किनकी एकातिर हामी पहिले नै टिप्पणी गरेका छौं कि उनीहरु प्राकृतिक पूरक हुन्, यसैले उनीहरु हाम्रो घरपालुवा जनावरहरुको स्वास्थ्य मा नराम्रो असर पर्दैन, तर बिल्कुल विपरीत किनभने उनीहरु उनीहरुलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछन्। यो अधिक छ, यदि तपाइँ कुनै मान्यता प्राप्त संयुक्त प्रकार को रोग छैन, यो सधैं रोकथाम गर्न को लागी राम्रो छ.
यदि तपाइँको कुकुर एक ठूलो नस्ल हो, उनीहरु लाई अधिक संयुक्त समस्याहरु छन्, उस्तै जस्तै यदि उनीहरु अधिक वजन वा यदि उनीहरु लाई अतीत मा चोट को केहि प्रकार भएको छ। यस्ता केसहरु भविष्य मा गम्भीर समस्याहरु हुन सक्छ र यसैले, रोकथाम सधैं राम्रो हुन्छ। तेसैले, कुकुरहरु को लागी chondroprotectors एक उपचार होईन तर एक पूरक हो।
कुन रोगहरु मा एक chondroprotector कुकुरहरु को लागी मद्दत गर्दछ
हिप डिसप्लासिया: जब कुकुर हुर्कन्छन् उनीहरु लाई यो जस्तै एक समस्या हुन सक्छ र त्यो अस्थिरता, साथै दुखाइ को कारण हुन सक्छ।
घुँडाको समस्या: सबैभन्दा सामान्य को केहि kneecap विलासिता वा ligament चोटहरु छन्।
शल्यक्रिया पछि: यो पनि एक छिटो रिकभरी को लागी आवश्यक छ, पुनर्वास प्रविधिहरु संग संयुक्त, जो पशु चिकित्सक प्रस्ताव गर्दछ।
ओस्टियोआर्थराइटिस: जब जोडहरु बाहिर लुगा, दुखाई धेरै तीव्र र पुरानो छ, त्यसैले कुकुरहरु को लागी chondroprotector यी लक्षणहरु लाई कम गर्न सक्छन्।
गठिया: यो जोडहरु को सूजन संग जोडिएको छ र जसको लागी पूरक पनि महत्वपूर्ण महत्व को हुनेछ।
ओस्टियोआर्थराइटिस: हामीले यसलाई पहिले उल्लेख गरेका छौं र यो सबैभन्दा सामान्य संयुक्त रोग हो। यो पूरक सूजन संग लडिएको छ।
कुकुरहरु को लागी chondroprotectors को सर्वश्रेष्ठ ब्रान्डहरु
जे होस् हामी अन्य ब्रान्डहरु सबै भन्दा राम्रो संग थाहा पाउन सक्छौं, यो सत्य हो कि Cosequin पनि कुकुरहरु को लागी सबै भन्दा मांग chondroprotectors बीच एक अन्तर बनाइरहेको छ। यो समग्रमा एक राम्रो उद्देश्य छ जस्तो देखिन्छ विशेष गरी ती कुकुरहरु को साथ मा अधिक वजन छ वा जो पहिले नै एक निश्चित उमेर छ। उपास्थि लगाउने र अन्य संयुक्त समस्याहरु लाई रोक्न को लागी।
यो सबै भन्दा धेरै प्रयोग गरीएको छ किनकि यो सत्य हो कि यो सबै बाट सबै भन्दा मान्यता प्राप्त मध्ये एक हो। यस अवस्थामा यो सधैं चोटहरु को उपचार को लागी प्रयोग गरीएको छ। केहि अवस्थामा मात्र चोटहरु कि एक विशिष्ट प्रकार को हो तर धेरै अन्य मा जुन पुरानो बन्छ। तिनीहरू सामान्यतया धेरै राम्रो राय छ जब यो परिणाम को लागी आउँछ। भिटामिन ई युक्त को अतिरिक्त।
Flexadin उन्नत ...
हामीले पहिले नै देखेका छौं कि यो हाम्रो कुकुरहरु को लागी केहि हड्डी रोग को विकास को लागी धेरै सामान्य छ र यदि तपाइँको विश्वसनीय डाक्टरले तपाइँलाई बताउँछ कि ओस्टियोआर्थराइटिस कुनै पनि समय तपाइँको जीवन मा प्रवेश गर्न सक्छ, तपाइँलाई यो जस्तै एक पूरक को आवश्यकता छ। किनभने यसको संरचना सबैभन्दा विविध छ र यो तपाइँलाई रोक्न वा रोग को प्रभाव मा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
Hyaloral 120 comp का लागि...
हामी पाइपलाइन मा कुकुरहरु को लागी यो अन्य chondroprotector छोड्न सकेनौं। किनभने यस मामला मा यो मात्र राय हो कि सकारात्मक बिन्दुहरु दिईन्छ मात्र होइन त्यहाँ अध्ययनहरु छन् कि यसको प्रभावकारिता देखाउँछन्। यसको अतिरिक्त हामी यसको स्वाद लाई हाइलाइट गर्दछौं, जुन तपाइँको घरपालुवा जनावरहरु को लागी धेरै सुखद छ।
के कुकुरहरु को लागी chondroprotectors साइड इफेक्ट छ?
मोटो रूपमा बोल्दै, हामी छैन भन्न सक्छौं। कुकुरहरु को लागी Chondroprotectors सामान्यतया साइड इफेक्ट छैन। तर हो, तपाइँ सधैं केहि विशिष्ट मामिलाहरुमा अलि सावधान रहनु पर्छ। यसको अवयवहरु को बीच ग्लुकोसामाइन गरेर, यो ग्लूकोमा को जोखिम बढाउन सक्छ। यदि तपाइँको कुकुर मधुमेह बाट ग्रस्त हुनुहुन्छ यो आवश्यक छ कि तपाइँ तपाइँको पशु चिकित्सक संग परामर्श गर्नुहोस्। यो पनी यो सल्लाह गर्न को लागी आवश्यक छ यदि तपाइँ कुनै पनि खाना को लागी एलर्जी हुनुहुन्छ, किनकि यो प्रश्न मा पूरक को कुनै पनि घटक संग अन्तरक्रिया गर्न सक्छ। केहि अवस्थामा, तर धेरै विशिष्ट, पखाला वा उल्टी को वर्णन गरीएको छ तर उनीहरु लगातार छैनन्।
मेरो कुकुर लाई chondroprotectors कसरी दिने
सच्चाई यो हो कि गोली ढाँचा मा आउँदैछ, यो एक बिट अधिक सहज हुन सक्छ, केहि अवस्थामा। किनकि सबै कुकुरहरु औषधि लिन साथी हुदैनन्। यी पूरक को केहि पहिले नै राम्रो स्वाद को लागी तपाइँ रमाईलो गर्न को लागी। तर यो सत्य हो कि उहाँवा राम्रो खाना को बीच यो मिश्रण गर्न को लागी हो.
प्रत्येक विशिष्ट ब्रान्ड आफ्नो पाल्तु जनावर को लागी chondroprotector दिन को लागी सक्षम हुनको लागी यसको चरणहरु ल्याउनेछ। तर सामान्य मा हामी तपाइँलाई भन्न सक्छौं यसको मात्रा वजन मा निर्भर गर्दछ तपाइँको पाल्तु जनावर को। यस कारण को लागी, कुकुरहरु5र 10 किलो को बीच वजन को रूप मा थोरै आधा एक ट्याब्लेट को रूप मा हरेक दिन लिन सक्छन्। यदि तपाइँ १० किलो पाउनुहुन्छ तब हो हामी उनीहरुलाई हरेक दिन एक ट्याब्लेट दिन जान सक्छौं। तर हामी भन्छौं, पक्का हुन को लागी, प्याकेज घुसाउन वा पशु चिकित्सक परामर्श जस्तै केहि छैन।
के chondroprotectors कुकुरहरु को लागी काम गर्छन्?
दिमागमा राख्नुहोस् कि यो आफैंमा एक उपचार होईन, बरु एक पूरक हो कि सुरक्षा र हाम्रो घरपालुवा जनावरहरुमा भविष्य को समस्याहरुको ख्याल राख्न सक्छ। तेसैले, यसमा विश्वास संग, जब मँ मेरो कुकुर chondroprotectants दिन को लागी अधिक वजन र संयुक्त समस्याहरु भएको कारण मैले देखेको छु कि यो साँच्चै काम गरीयो। यो सत्य हो कि यो एक दिन बाट अर्को चमत्कारिक केहि छैन, तर तपाइँ परिणाम देख्नुहुन्छ। अधिक तौल को मामला मा, अन्य दिशानिर्देशहरु लाई पनि यो स्थिति मा सुधार गर्न को लागी पालन गर्नु पर्छ, तर chondroprotector ले उनीहरुको क्षमता वा ती शारीरिक सीमाहरु लाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ जुन उनीहरु समय वा स्वास्थ्य समस्या को कारणले प्राप्त गर्छन्। मेरो घरपालुवा जनावर मा एक परिवर्तन थियो, केहि गतिशीलता समस्याहरु लाई छोडेर र एक राम्रो मूड भएको.
कुकुरहरु को लागी सस्तो chondroprotectors किन्न को लागी
अमेजन: यद्यपि यो किनमेल विशाल बराबर उत्कृष्टता हो, यो पनी उल्लेख गर्नु पर्छ कि हामी बिभिन्न ब्रान्डहरु, सबै भन्दा राम्रो ज्ञात र सबै भन्दा राम्रो रेटिंग संग पाउन सक्छौं। यो तपाइँको छनौट सधैं सही एक बनाउँछ र, संग बजार मा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु। पूरक को यी प्रकार को रूप मा साँच्चै सस्तो हुन को लागी ज्ञात छैन।
किवोको: यो उत्कृष्टता को रूप मा पालतू पशु स्टोरहरु मध्ये एक हो र जस्तै, उनीहरु लाई कुकुरहरु को लागी chondroprotectors पनि छ। उनीहरु धेरै ब्रान्डहरु र पक्कै छन्, ती मध्ये प्रत्येक मा विभिन्न मूल्यहरु संग, त्यसैले तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु को आधार मा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो तरिका मध्ये एक हामी हाम्रो प्यारो मान्छे को रक्षा गर्न सक्षम हुनु पर्छ।
किमिफार्मा: साथै जनावरहरु को लागी पूरक Kimipharma मा आइपुग्छ र यसको अतिरिक्त, तपाइँ रमाईलो गर्न सक्षम हुनुहुनेछ धेरै सस्तो मूल्य, जसले तपाइँलाई तपाइँको घरपालुवा जनावरहरुलाई यसको लागी अधिक तिर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो दिन को लागी अनुमति दिनेछ। पोर्चुगल मा यसको मुख्यालय संग, यो जीवन को गुणवत्ता मा सुधार को लागी धन्यवाद, हालैका बर्षहरुमा सबैभन्दा प्रशंसित स्टोरहरु मध्ये एक हो।
टेन्डेनिमल: Tíanimal मा तपाइँ साँच्चै कम मूल्यहरु बाट पूरक पाउनुहुनेछ के हामी दिमागमा थियो। विभिन्न ब्रान्डहरु गोली ढाँचा संग तेसैले तपाइँ यसलाई तपाइँको घरपालुवा जनावरहरु को लागी एक अधिक सहज तरीका मा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अतिरिक्त, कुल सुरक्षा र यो जस्तै एक स्टोर को विश्वास संग।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » रोगहरू » कुकुरहरु को लागी Chondroprotectors